Dagaalkii Lix Maalmood - Land Of Punt
Dagaalkii lixda maalmood socday, ee asalkiisu ka ahaa xiriirka xasilloonida ka dhexeysa Israel iyo waddamada deriska la ah carabta, ayaa guul weyn u ah reer binu Israa’iil, kana soo kicitimay dhulkoodii dagaalkii ka hor.
Qeex dhacdooyinka Dagaalkii Lixda Maalmood ahaa
QODOBBADA MUHIIMKA AH Xiriirka ka dhexeeya Israa’iil iyo waddammada deriska la ah ee Carbeed weligood si buuxda uma noqon mid caadi ah ka dib Dagaalkii Carab-1948-kii ee Israel, isla markaasoo la diriray markii Israa’iil ay ku dhawaaqday inay tahay qaran-madax-bannaan.Arimaha sida dhibaatada qaxoontiga reer Falastiin iyo qalalaasaha Suez ee 1956 waxay abuureen mowqif iska soo horjeedo dhanka Israa’iil guud ahaan carabta, iyo ilaa Juun 1967, xiisadaha ayaa heerkoodu sarreeyay.Markii laga jawaabayey abaabulkii ciidammada Masar ee ku teedsan xadka Israail ee gacanka Siinay, Israa’iil waxay qaaday duulimaadyo taxane ah oo ka dhan ah garoommada diyaaradaha Masar, kuwaas oo burburiyey ku dhawaad dhammaan ciidamada cirka Masar.Masar, iyagoo iska dhigaya inay ku guuleysteen dagaalladii bilowgii, waxay ka dhaadhicisay Jordan ka dibna Syria inay galaan dagaalka, taas oo sidoo kale keentay guulaha Israel.Dhamaadka dagaalka, lix maalmood ka dib, Israel waxay gacanta ku dhigtay marinka Qaza iyo Jasiiradda Siinay oo ka timid Masar, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus kana xigta Jordan, iyo Golan Heights oo ka timid Syria.Rabitaanka Israa’iil iyo sharafta caalamiga ah ayaa si weyn loogu kordhiyay natiijada dagaalka, laakiin kalsoonidooda badan waxaa laga yaabaa inay ku biirtay guuldaradii militari ee mustaqbalka ka soo gaartay Masar dagaalkii Yom Kippur ee 1973.
SHURUUDAHA MUHIIMKA AHDagaalkii Yom KippurDagaal ay ku dagaallamaan isbaheysiga dowladaha carbeed oo ay hogaaminayeen Masar iyo Siiriya kana soo horjeedaan Israa’iil laga soo bilaabo Oktoobar 6 ilaa 25, 1973. Dagaalku wuxuu inta badan ka dhacay Siinay iyo Golan Heights, dhulal ay Israa’iil qabsatay ilaa Dagaalkii Lix-Maalin. of 1967. Madaxweynaha Masar Anwar Sadat wuxuu kaloo rabay inuu dib u furo marinka Suez. Midkoodna si gaar ah uma qorsheyneynin inuu baabi’iyo reer binu Israa’iil, in kasta oo hoggaamiyeyaasha Israa’iil ayan hubin karin arrintaas.1948 Dagaalkii Carab-IsraelDagaal u dhexeeya Gobolka Israel iyo isbahaysi milatari oo ka socda dawladaha Carbeed, oo samaynaya marxaladda labaad ee dagaalkii 1948 ee Falastiin. Dagaallada sokeeye ee socda ee u dhexeeya Yuhuuda iyo Carabaha ee Falastiin ayaa isu beddelay khilaaf u dhexeeya Israel iyo dawladaha Carabta ka dib Baaqii Madaxbanaanida ee Israel maalintii hore. Duullaan isugu jira Masar, Jordan, iyo Syria, oo ay weheliyaan ciidamada duulaanka ah ee ka socda Ciraaq, ayaa galay Falastiin.
Dagaalkii Lix-Maalin, oo sidoo kale loo yaqaan Dagaalkii Juun, 1967 Dagaalkii Carab-Israel, ama Dagaalkii Saddexaad ee Carab-Israel, ayaa waxaa lagu dagaallamay intii u dhaxeysay June 5 iyo 10, 1967, Israel iyo dowladaha deriska la ah ee Masar (oo loo yaqaan waqtigaas. Jamhuuriyadda Isutagga Imaaraatka), Jordan, iyo Syria.
Xiriirka ka dhexeeya Israa’iil iyo derisyadiisa weligood si caadi ah ugama mid noqon ka dib Dagaalkii 1948-kii-Isra’iil. Muddadii u dhexeysay ilaa Juun 1967, xiisadaha si aad ah ayey u kordheen. Markii laga jawaabayey abaabulkii ciidamada Masar ee ku teedsan xadka Israail ee gacanka Siinaay, Israa’iil waxay qaaday duulimaadyo taxane ah oo ka dhan ah garoommada diyaaradaha Masar. Masriyiintii aad bay ula yaabeen, ku dhawaad ciidanka cirka Masar oo dhanna waxaa lagu burburiyey qasaaro yar oo Israel ka soo gaadhay, taasoo siinaysa awood sare hawada Israa’iil. Isla mar ahaantaana, Israa’iil waxay weerar ku qaadday marinka Qaza iyo Siinay, oo mar kale ku qabsatay Masriyiinta si lama filaan ah. Kadib xoogaa iska caabin ah, hogaamiyaha Masar Gamal Abdel Nasser wuxuu amar ku siiyay ka bixitaanka Siinay. Ciidamada Israa’iil waxay u carareen dhanka galbeed iyagoo ka daba eryaya Masriyiinta, oo ay geysteen khasaare culus,Nasser wuxuu ku qasbay Syria iyo Jordan inay bilaabaan weeraro ay ku qaadaan Israel iyagoo adeegsanaya xaalada markii hore jah wareertay inay sheegtaan inay Masar ka adkaadeen duqeyntii cirka ee Israel. Jawaab celinta Israel waxay sababtay qabsashadii Bariga Qudus iyo Daanta Galbeed laga qaado dadka reer Jordan, halka aargudashada Israel ee Syria ay keentay in ay qabsadaan Golan Heights.
Juun 11, xabad joojin ayaa la saxeexay. Khasaaraha Carabtu wuu ka culusaa kuwa reer binu Israa’iil: in ka yar kun Israailiyiin ah ayaa ladilay marka loo eego in ka badan 20,000 oo ciidamada carabta ah. Guusha milatariga Israel waxaa loo aaneynayaa inay tahay wax lala yaabo, qorshe dagaal oo cusub oo sifiican loo fuliyay, iyo tayo xumo iyo hogaaminta ciidamada carabta. Dagaalkii awgiis, Israa’iil waxay gacanta ku dhigtay marinka Qaza iyo gacanka Siinay oo ka yimid Masar, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus xagga Jordan, iyo Golan Heights oo ka timid Syria. Niyadda Israa’iil iyo sharafta caalamiga ah ayaa si weyn loogu badelay natiijada dagaalka, iyo dhulka ay Israel gacanta ku hayso sedex jibbaar. Si kastaba ha noqotee, xawaaraha iyo fududeynta guushii Israel waxay horseedi doontaa kalsooni xumo halis ku jirta darajooyinka Ciidamada Difaaca Israel (IDF), ku biirinta guulaha bilowga ah ee Carbeed bilowgii 1973 Dagaalkii Yom Kippur. Barakaca shacabka rayidka ah ee dagaalka ka dhashay waxay yeelan doontaa cawaaqib xumo muddo dheer ah, maaddaama 300,000 oo Falastiiniyiin ahi ay ka carareen Daanta Galbeed halka ilaa 100,000 oo reer Suuriya ah ay ka tageen Golan si ay u noqdaan qaxooti. Guud ahaan dunida carabta, jaaliyadaha tirada yar ee Yuhuuda ah waa la cayriyey, iyadoo qaxooti ku aadaya Israa’iil ama Yurub.Natiijooyinka Dagaalkii Lix-Maalin: Dhul ay qabsatay Israel kahor iyo kadib Dagaalkii Lixda maalmood. Israel waxay gacanta ku dhigtay marinka Qaza iyo gacanka Siinay oo ka yimid Masar, daanta galbeed iyo bariga Qudus kana yimid dhanka Jordan, iyo Golan Heights oo ka timid Syria.
Asalka Dagaalkii Lix Maalmood ayaa isugu jira arrimo muddo dheer soo jiray iyo kuwo deg deg ah. Waqtigaan, aasaaskii hore ee Israa’iil, natiijada qadiyadda reer Falastiin, iyo ka qeyb galka Israa’iil duulaankii Masar intii lagu jiray qalalaasaha Suez ee 1956 waxay ahaayeen cabasho weyn xagga dunida Carabta. Wadaniyiinta Arab, oo uu hogaaminayo Madaxweynaha Masar Gamal Abdel Nasser, waxay sii wadayaan cadaawada jiritaanka Israail waxayna sameeyeen cabsi weyn kuhayaan shacabka Yuhuuda. Bartamihii 1960-meeyadii, xiriirka u dhexeeya Israa’iil iyo deriskiisa Carab ayaa xumaaday illaa xad ay isku dhacyo xuduudeed ka dhacayeen.
Bishii Abriil 1967, Suuriya waxay toogasho ku dishay cagaf-cagaf Israa’iil oo ku dhex qodaya aagga dumay, kaasoo u sii gudbay isku dhac xagga hawada ka hor ah. Bishii Meey 1967, ka dib markii ay si qaldan u fahmeen ujeeddooyinka Israel ay siisay Midowga Soofiyeeti, Masar waxay ka cayrisay ciidammadii nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay ee degganaa Jasiiradda Siinaay ilaa dagaalkii Suez, waxayna ku dhawaaqday inay xayirayaan marin u helitaanka Israel ee Badda Cas (biyaha caalamiga ah) ee loo maro Waddooyinka Tiran, oo ay reer binu Israa’iil u arkeen ficil dagaal. Xiisad ayaa kacsan, iyadoo labada dhinacba ay abaabulayaan ciidammada labada dhinac. In ka yar hal bil ka dib, Israa’iil waxay ku dhaqaaqday shaqo joojin yaab leh oo bilaabatay Dagaalkii Lix Maalin.
Ka DibMuhiimadda siyaasadeed ee Dagaalkii 1967 aad buu u weynaa; Israail waxay muujisay inay awood u leedahay oo ay diyaar u tahay inay bilawdo duqeymo istiraatiiji ah oo wax ka beddeli kara isu dheellitirka gobolka Masar iyo Suuriya waxay barteen casharro taatiko ah waxayna weerar ku qaadi lahaayeen 1973 iyagoo isku dayaya inay dib u qabsadaan dhulkoodii lumay.Dagaalkii kadib, Israa’iil waxay la kulantay mowjad qaran oo qaran, saxaafaduna waxay amaaneen waxqabadka militariga usbuucyo kadib. “Qadaadiicda guusha” ee cusub ayaa loo qariyey inay dabaaldegaan. Intaas waxaa sii dheer, xiisaha adduunka ee Israa’iil ayaa koray, iyo dhaqaalaha waddanka, oo qalalaase ka jiray dagaalka ka hor, oo u ku batay sababtuna tahay dalxiisayaal ku soo qulqulaya iyo tabarucyo, iyo sidoo kale soo saarista saliidda ceelasha Siinay.
Wadamada carabta, dadka tirada yar ee yahuudda tirada yar ayaa wajahay cadaadis iyo cayrin kadib guushii Israel. Sida laga soo xigtay taariikhyahan iyo safiir Michael B. Oren:Falaagada ayaa weerartay xaafadaha Yuhuuda ee Masar, Yemen, Lubnaan, Tunisiya, iyo Marooko, iyagoo gubay sunagogyada oo ay weerareen dadka deegaanka. Magaalada Pogrom ee Tripoli, Libya, waxaa ku dhintey 18 qof oo Yuhuud ah 25na waa ay ku dhaawacmeen; badbaadayaasha waxaa lagu xardhay xarumaha dadka lagu hayo. 4,000 oo Yuhuud ah oo reer Masar ah, 800 ayaa la qabtay, kuwaas oo ay ku jiraan madaxdii sare ee Qaahira iyo Alexandria, iyo hantidoodii ay dawladdu lahayd. Beelaha qadiimiga ah ee Dimishiq iyo Baqdaad waxaa la geliyay xabsi guri, hogaamiyayaashooduna waa xidheen oo ganaaxeen.
Wadar ahaan 7,000 oo Yuhuud ah ayaa la cayriyey, qaar badan oo keliya oo sitley ah.Dagaalkii kadib, Israa’iil waxay sameysay dalab nabadeed oo ay kujirto soo laabashada inta badan dhulalkii dhowaan la qabsaday. Sida uu qabo Chaim Herzog:Bishii Juun 19, 1967, Dawladda Midnimada Qaranka ee [Israel] waxay si wada jir ah ugu codeysay in Siinay ugu laabato Masar iyo Golan Heights si Suuriya si heshiis nabadeed loogu celiyo. Golansku waa inuu noqdaa mid la dumiyaa isla markaana qorshe gaar ah laga wada xaajoodo dariiqyada Tiran. Dowladda ayaa sidoo kale go’aansatay inay wadahadal la furto King Hussein ee Jordan oo ku saabsan xadka bariga.Bishii Sebtembar, Shirkii Carab ee Khartoum wuxuu xalliyey “ma jiri doono nabad, aqoonsi iyo wadahadal la’aan Israel.” Si kastaba ha noqotee, sida Avraham Sela xusay, shirkii Khartuum wuxuu si wax ku ool ah isu beddelay aragtidii khilaafkii ka dhexeeyey dawladaha carabta oo ka fog mid xuddun u ahayd su’aasha ku saabsan sharciga Israel inay tahay mid diiradda saaraya dhulalka iyo xuduudaha.